Eden Hazard oo sheegay sababta ka danbeesay in oo ku biiro kooxda Real Madrid | Xidigaha
Home Horyaalka England Eden Hazard oo sheegay sababta ka danbeesay in oo ku biiro kooxda...
Xidigii hore kooxda Chelsea ee Eden Hazard ayaa sheegay ku biiristiisa Kooxda Real Madrid in oo ka danbeeyey Macalin Zidane ka danbyey ku biiristiisa Horyaalka Spain gaar ahaan Real.
Hazard ayaa lala xariirinaayey sanadadii ugu danbeeyey kooxda Real Madrid in ku biiro, waxa oo ka dhabeyey in oo ku biiro kooxdaas, macalinkii ugu danbeeyey Kooxda Sarri ayaa ka codsaday in Hazard oo ka tagan kooxda laakiin taas waa diiday.
Waxa isbedel ah kuma soo kordhin kooxda Real sidii oo ugu biiray Eden waxa oo dhaliyey hal gool kaliya, Taageerayaasha kooxda Real Madrid ayaa ku riyoonayey in ay heleen bedelka C.ronaldo laakiin taas wali kalama cada.
Xidiga ayaa u muuqda mid wali aysan go,an jaceylkii oo u qabay kooxdiisii hore ee Chelsea asago oo dhiibaya warbixino joogtada ah uga hadlaa kooxdiisi hore.
Kooxda Chelsea waa u darsatay xidigoodii hore ee Eden Hazard waxaana taas daliil u ah sidii ay guuldarada ugala kulmayaan kooxaha waa weyn, waxaa kulankii ugu danbeeyey garaacay kooxda Man City halka kooxaha Liverpool iyo Man United ay soo garaaceen.
Previous articleEden Hazard ayaa daaha ka qaaday xidiga oo la jeclaan lahaay abaal marinta Ballon D,or, waa xidigee?
Next articleAguero oo ka maqnaan doona kulanka Derbi Manchester.